Goobaha internetka ee leh macluumaad, talo iyo taageero | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Daryeel iyo caafimaad / Goobaha internetka ee leh macluumaad, talo iyo taageero
Terrafem waxay leedahay sanado badan oo ah waayo-aragnimada in la taageero haweenka iyo gabdhaha lagu dhibaateeyay dagaal. Iyagu waxay ku hadlaan luqado badan oo kala duwan. -SE
Unizon wuxuu ururinayaa in ka badan 130 xarrumo dumar, xarrumo gabdho iyo xarrumo kaalmeeyn ah kuwaaso ka shaqeynaya bulsho simman oo ka maran gacan ka hadal. - SE
Khadka nabadgelinta dumarka
Khadka nabadgelinta dumarka waa telefoon lambar oo qaranka, wuxu quseeyaa adiga hanjabaad iyo jirdil la kulmay
Killfrågor.se waa wadasheekeysi kaalmo ah oo wiilasha iyo kuwa bedelay jinsigooda ee da'dooda u dhexeyso 10 illaa 18 sano ay kula sheekeysan karaan ayagoo qarsoon dad mutadawiciin ah.
1000 Möjligheter waxey ku siin kartaa caawinaad iyo kaalmo adiga ka yar 25 sano kaasoo soo dareemay ama dareensan in lagu xadgudbay dareenkiisa galmo.
Ururka Transföreningen FPES
Transföreningen FPES, , Full Personality Expression Sweden, waxay cod u yihiin dadka jecel inay noqdaan jinsi aanay ahayn ee bulshada ku jira. Ururkan wuxuu ka shaqeeyaa warbixinaha ku saabsan arrimaha dadka jecel inay noqdaan jinsi aanay ahayn.
ROKS, Ururuka qaranka ee Heeganka Haweenka iyo Heeganka Gabdhaha ee gudaha Iswiidhan
ROKS waxay haysataa qiyaasti 120 ah xubnaha heeganka kuwaas oo taageero iyo gabood siiyaa haweenka, gabdhaha iyo caruurta lagu dhibaateeyay dagaal kaga yimi ragga, iyo haweenka ku jira xiriirka naagaha jecel naagaha kale.
Carruurta iyo dhallinyarada ilaa 18 sano, ayagoo magacooda sheegin iyo bilaash weey la soo xiriirikaran BRIS, markey caawinada qof weey uga baahdaan. - SE
Yuomo - rug qaabilaad oo intarneet ah oo leh luqado fara badan
Halkan waxaad ka akhrisan kartaa, kana fiirsan kartaa filmaan ku aaddan galmada, caafimaadka iyo xiriirrada iyo wax fara badan oo dheeraad ah.
Heeganka gabdhaha- iyo dumarka ee Somaya
Heegan gabdho- iyo dumar oo dumarka loo geysto dhibaatada siinaya deegaan gabbaad ah iyo talo iyo taageero khadka taleefanka ah. Waxay ku hadlaan luqado aad u fara badan oo kale duwan.